लामखुट्टेकै वरिपरी हुनुहुन्छ ? डेंगु हुनसक्छ, यसरी बच्नुस् « Postpati – News For All
लामखुट्टेकै वरिपरी हुनुहुन्छ ? डेंगु हुनसक्छ, यसरी बच्नुस्
हाल देशभर डेंगुको प्रकोप बढदै गएको छ । डेंगु ज्वरोका काण धेरै जना बिरामी परेका छन् ।
मानिसहहरुमा डेंगुको संक्रमणसँगै त्रास पनि बढेको छ । डेंगुको समयमा उपचार नहुँदा वा वेवस्ता गर्दा बिरामीको मृत्यु हुने जोखिम समेत रहन्छ । त्यसैले डेंगु लागेको हो वा होइन समयमै पहिचान गरी उपचार गर्नुपर्छ ।
डेंगुको लक्षणहरु यी हुन् :
आँखाको वरिपरी तथा कन्चटमा धेरै दुख्नु,
सबै शरीर दुख्नु,
साना बिमिरा आउनु,
वाकवाकी लाग्नु र वान्ता आउनु,
हड्डी तथा मांशपेशी निकै दुख्नु,
आँखा तथा घांटी रातो हुनु ।
डेंगुका बिरामीले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि उपचार गरेरमा निको हुन्छ । डेंगुका बिरामीले औषधि उपचारसँगै विभिन्न कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । डेंगुका बिरामीले ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
बालबालिका, बृद्धबृद्धा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरु, दीर्घ बिरामीहरुलाई बिशेष ख्याल गर्नुपर्दछ । जुनसुकै ज्वरो आएपनि यथेष्ट आराम गर्ने, झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त खाने, सागसब्जी र फलफुल र गेडागुडीको रस, दाल, सुप नियमित खानुपर्छ । डेंगुको कुनै बिशेष औषधि तथा खोप छैन ।
डेंगुबाट बच्न यस्तो गर्नुस्
लामखुट्टे भगाउने स्प्रे अथवा लोसन शरीरमा लगाउने,
बाहुला पुरा भएको शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने,
डेंगु लाग्ने लामखुट्टेले दिनमा बढी टोक्ने भएकोले दिउँसो सुत्दा झुल प्रयोग गर्ने,
सकभर भीडभाडमा नजाने,
घर वरिपरी पानी जम्ने खाल्डो पुर्ने,
घरभित्र पानीलाई छोपेर राख्ने,
बाथरुम ओभानो राख्ने,
टायर र पाइप आदिमा पानी जम्न नदिने,
२०७६ भाद्र १९,बिहीबार को दिन प्रकाशित
कपिलवस्तुको मैनारी खोलामा पुल बन्यो
नुवाकोटमा घर भत्किँदा वृद्धको मृत्यु, पहिरोले पाँच घर पुरिए
भान्जाको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त १३ वर्षपछि पक्राउ
नुवाकोटमा आजपनि थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ३५ पुग्यो
साँफे–मार्तडी सडक तत्काल सुचारु नहुने